Abaphathi baseMelika bayaphangwa ... | Martech Zone
Abaphathi baseMelika bayachithwa…
Lwesine, Okthobha 20, 2005 NgoMgqibelo, Oktobha 18, 2014 Douglas Karr
Abaphathi baseMelika bayaphangwa. Abanye baziibrats.
Khawufane ucinge ngokulawula kwisiqithi. Isiqithi sakho sinemida yabantu, bekukho iiyure kude kuyo nantoni na kwaye uthetha ulwimi olwahlukileyo. Ukutsala abasebenzi kwisiqithi sakho kunzima ngenxa yolwimi lwasekhaya kunye nesiqithi. Isiqithi asikho kwi-orient okanye kwiCaribbean, kuyabanda kwaye kufumile ngeenyanga ezithile kuphela kunika iiyure zemini. Ukukhula, abasebenzi bakho bafundisiwe ukuthetha ezinye iilwimi ezimbini ezizezinye kuba ulwimi lwakho alwaziwa ngaphandle kwesiqithi sakho.
Njengomphathi kunye nelungu lesiqithi, luxanduva lwakho ukuhambisa abasebenzi bakho kwizikhundla abanokuphumelela kuzo. Kufuneka usebenze nzima ukugcina abasebenzi; kuba, nangona ilikhaya labo, banokusishiya isiqithi nanini na xa befuna ukulandela amanye amathuba. Kuya kufuneka utyale imali eninzi kubasebenzi bakho kwimivuzo nakwizibonelelo. Umsebenzi ngamnye uqala kwiiveki ezintlanu zeholide ngonyaka. Awungekhe ukwazi ukukhuthaza abantu ngokukhawuleza kuba ingeniso yabasebenzi kunye nenzondo zingangcwaba ishishini lakho.
Isiqithi yi-Iceland. Isixeko yiReykjavik. Lizwe elinomdla. Abantu bayo bazizityebi ngenkcubeko, ngembali, kwaye banenye yeenkcubeko ezisempilweni nezityebileyo emhlabeni. Ukuloba kunye nokhenketho ziimveliso eziphambili e-Iceland. Banezona ntlanzi zintle ehlabathini. Isiqithi sinezinto ezininzi ezinomdla kumhlaba womkhenkce, iigiza, ukuya kumathafa odaka.
Inkampani yam indithumele eIceland kule veki ukunceda omnye wabathengi bethu. Ukususela ngexesha esasifika ngalo, sasisoyika. Inkcubeko yombutho, ubungcali kunye nokuzinikezela kwabasebenzi kwahluke kakhulu kunayo nayiphi na inkampani yaseMelika endakha ndasebenza nayo. Inyani yile, ndicinga ukuba sonakele.
EMelika, ukuba awumthandi umqeshwa wakho ungamgxotha ngokulula, umcele ukuba ahambe, okanye wenze ungonwabi ngokwaneleyo ukuba bemke. Ukuba azivelisi, akukho mfuneko yokuba usebenzise izixhobo ngokufumana entsha. Imveliso yethu kolu hlanga yaziwa kwihlabathi liphela kodwa ayisiyiyo ngenxa yabaphathi bethu abakhulu. Kungenxa yobutyebi obukhulu babantu esinabo. Kuthetha ukuba akukho mfuneko yokulawula. Akukho mfuneko yokuba sikhokele. Asibuboni ubude beenkampani njengempahla yexabiso ngokufuthi ukuba ixesha elide umqeshwa ekunye nenkampani; sijolise kubo ngobuthathaka babo.
Umxhasi esindwendwele yena lishishini elinenzuzo kurhwebo lwamanye amazwe oluhamba-hamba phantse kuyo yonke indawo. Bajongene nemiceli mngeni emininzi kunathi. Ngapha koko, abo bakhuphisana nabo kwilizwe lethu banokungabinamali njengenxalenye yesicwangciso seshishini sabo! Bajolise kumgangatho, ngelixa abo bakhuphisana nabo bagxile kwixabiso. Banamaqhinga exesha elide, ngelixa abo bakhuphisana nabo bexhalabile ngamaxabiso esitokhwe sanamhlanje. Ukuphila kwabo kuyayifuna, kwaye bayakuhlangula.
Kuzo zonke iindawo, inkcubeko yabo kunye nobunzima bokusingqongileyo kufuna ukuba babe ngabathengisi abangcono, oosomashishini abangcono, kwaye uninzi lwabo bonke, ngabaphathi abangcono. Njengokuba sasihleli kwiintlanganiso zethu nenqwaba yabasebenzi, sasingakwazi ukuxela ukuba yeyiphi ngaphambili kunye nabaphathi abaphezulu - bonke babenolwazi, bezimisele, bethetha, kwaye bezibandakanya.
Kumsebenzi wam, ndidibene nabaphathi aba-1 okanye aba-2 abanokwazi ukukhuphisana kule meko. Ngokudabukisayo, amawaka abanye endikhe ndasebenza nawo akabambi khandlela. Ukunyaniseka, ndicinga ukuba ndingomnye wabokugqibela…. Andiqinisekanga ukuba nam ndingaphumelela apho.
Abaphathi bethu bonakele. Akukho mfuneko yokuba balawule, akukho mfuneko yokuba bahlengahlengise imeko-bume yabo batshintsha nje imeko-bume ukufihla ukungakwazi kwabo ukukhokela. Kwamanye amashishini, ingeniso yabasebenzi iluncedo kuba ingagcina intlawulo iphantsi. Abanye bakholelwa ukuba kubiza imali encinci ukufumana umqeshwa omtsha kunokugcina umntu onamava.
UNathan Myhrvold, owayesakuba nguSosayensi oyiNtloko, kwaMicrosoft wathi, 'Abaphuhlisi abaphambili besoftware banemveliso ngakumbi kunabaphuhlisi besoftware abaphakathi hayi nge-10X okanye i-100X, okanye i-1,000X, kodwa i-10,000X.â ??? Ndiqinisekile ngokuqinisekileyo ukuba le ngxelo inokuphindwa kuyo yonke imibutho. Inyani yile - umqeshi olungileyo akafanelekanga Kaninzi kunabanye abasebenzi, bafanelekile ngokucacileyo ngakumbi.
Njengoko umhlaba wethu uqhubeka nokudibanisa, isiqithi sethu siya sincipha. I-Melika ngoku iba ngumthengi kwindawo yentengiso yehlabathi kwaye asizukuphumelela ngaphandle kokuba sibambe abaphathi bethu baphendule. Into efuna ukuba i-Iceland yenze ayikude kakhulu kwilizwe lethu. Abasebenzi kunye nabaphathi bethu abalungileyo baya kuthathwa ziinkampani ezixabise ukuxabiseka kwazo. Abaphathi abangalunganga baya kukhwela iinkampani zabo ezimbi baye emhlabeni.
tags: Americajikeleleqoqosho lwehlabathiAyisilendngamazweulawuloumlawuliihlabathi